Ukubaluleka kwemakethe yezimali yakwamanye amazwe emnothweni | Ezezimali Zomnotho
UJose recio | | Ipolitiki yezimali
Uma kukhona impahla yezezimali yokubaluleka okukhethekile emnothweni, iyimakethe yokushintshaniswa kwamanye amazwe. Wake wezwa ngakho futhi kungenzeka ukuthi kukusetshenzisele ukwenza imisebenzi yakho yezomnotho ibe nenzuzo. Sekuyiminyaka eminingi sekuyindawo yokubhekiselwa ku- thola ubuhlobo bebhizinisi, hhayi kuphela kuwo wonke amazwe eplanethi, kepha futhi naphakathi kwabantu. Ngalesi sizathu kubaluleke kakhulu ukuthi ube nolwazi oluphelele lokuthi kusho ukuthini ebudlelwaneni bezomnotho.
Uma sikhuluma ngemakethe yezimali, empeleni sibhekisa ku- Forex. Kuyisifinyezo segama lesiNgisi elithi Foreign Exchange futhi kwenzeka njengenye ye izimakethe esebenza kakhulu emhlabeni futhi obonakala ngokwabelwa amandla ngokuqinile. Yebo, zonke izinhlobo zezimali zangaphandle noma zezimali zomhlaba wonke ziyathengiswa kuyo. Hhayi kuphela okwaziwa kakhulu, njenge-euro, idola laseMelika, iswitzerland franc noma iphawundi laseBrithani, phakathi kokunye okufanele kakhulu. Kepha abanye abavela kunoma iyiphi indawo yezomnotho yamazwe omhlaba.
Ngale makethe yezimali ekhetheke kakhulu, ezezimali bahweba ngawo wonke amahora futhi benza lonke uchungechunge lwezinguquko ekulinganisweni kwabo. Lokhu kuhamba kusetshenziswa ngabatshalizimali ukuzama ukwenza imali yabo etholakalayo izuze. Akumangalisi ukuthi ingenye yezimakethe ezisebenza kakhulu emhlabeni ngoba ingatshalwa cishe kunoma iyiphi imali emhlabeni. Lapho ukuguquguquka okuphezulu kwamanani abo kungelinye lamahlelo abo ajwayelekile. Kuze kube seqophelweni lokuthi uvule futhi uvale izikhundla ngeseshini eyodwa ezimakethe zezimali. Ngomehluko omkhulu phakathi kwezinzuzo nokukhubazeka ongakuthola kusukela manje kuqhubeke.
1 Imali: ukuhamba kwemali
2 Ukuhweba ngemali yakwamanye amazwe
3 Zinjani lezi zimakethe?
4 Ngaphezu kokushintshana
5 Imisebenzi yemakethe ye Forex
6 Ukufika kwama-cryptocurrensets
Imali: ukuhamba kwemali
Vele, ukubukeka kwayo kungenxa yesizathu esithile futhi lokho kuhlobene kakhulu nobudlelwano bezomnotho. Ngalo mqondo, awukwazi ukukhohlwa ukuthi le makethe yazalwa inenhloso ecace bha nokuthi ayikho enye ngaphandle kokwenza lula ukugeleza okususelwa ekuhwebeni kwamazwe omhlaba. Konke kuthengwa kuthengiswe ngemali, noma ngabe bekuyini. Ngokwezinga lokuthi yilokho okunikeza ukubaluleka kokusebenza okwenziwa emhlabeni wonke. Ngesixhumanisi esiqonde ngqo sokuthi iyini intengo yemali. Akumangalisi ukuthi izinqubomgomo zemali zisuselwa emiphumeleni enikezwa izimakethe zemali.
Ngakolunye uhlangothi, awukwazi ukukhohlwa ukuthi ukushintshaniswa kwamanye amazwe kuyithuluzi lokuklama inqubomgomo yezomnotho yezwe. Ngaphandle kokunye ukubaluleka kwezomnotho okubalulekile. Lapho ingxenye enhle yokusebenza kwamazwe omhlaba yenziwa ngezimali ezithile. Njengesibonelo, esimweni esithile se- i-euro nedola kusuka e-United States. Ngalesi sizathu, ushintsho olwenzeka ezimakethe lapho lubhalwe khona lubaluleke kakhulu. Kuze kube seqophelweni lokuthi bakwazi ukukhipha isiphepho esikhulu sezimali, njengoba kwenzekile emashumini eminyaka amuva nje. Noma kubangele ukwehla kwezomnotho okufanelekile.
Ukuhweba ngemali yakwamanye amazwe
Kunjalo ukubaluleka kwale mpahla yezezimali ebalulekile ukuthi kubaluleke kakhulu ukwenza noma yimuphi umsebenzi wezohwebo. Ukufika lapho ukuthi ngokusho kwe- Ibhange Lwezokuhlaliswa Kwamanye Amazwe, Imiphumela yokuqala yomhlaba evela ku-2016 Triennial Banking Market Foreign Exchange kanye ne-Derivatives Survey ikhombisa ukuthi ukuhweba ezimakethe zokushintshaniswa kwamanye amazwe kulinganiselwa ku-US $ XNUMX trillion ngalesi sikhathi. Lesi yisibalo esigcizelela ukubaluleka kwezimali ezikhiqiza ngokugeleza kwemali emhlabeni jikelele.
Ukuze le nqubo ikhule kahle, izimali kufanele zilawulwe ukuthola inani lazo. Futhi ngalo mqondo, kuyizimakethe zezezimali ezisebenzayo labalamuli kuya ngomthetho wokunikezela nokufunwa ngesikhathi ngasinye. Ngokuhluka okuqhubekayo kwikhotheshini yamanani abo nakuzo, abatshalizimali abancane nabaphakathi bangasebenzisa wonke umsebenzi wabo kulezi zimakethe ezikhetheke kakhulu.
Zinjani lezi zimakethe?
Izimakethe zezezimali lapho lezi zimpahla zifakwe kuhlu zifana kakhulu nolunye utshalomali. Isibonelo, ukuthenga nokuthengisa amasheya esikhwameni. Kepha nge-nuance encane okufanele uyicabangele kusukela manje kuqhubeke. Akukho okunye ngaphandle kokwehluka kwawo okuqhubekayo, okungakusiza ukwenza imisebenzi yakho yokuhweba. Ungathola imali eningi ngalezi zindlela zokunyakaza, kepha ngesizathu esifanayo, shiya ama-euro amaningi usendleleni. Akunasikhathi lapho kufanele ukhohlwe ubungozi obukhona emisebenzini yakho. Ngaphezu kwamanye amakilasi ajwayelekile wokutshala imali.
Kulesi simo esivamile, kubaluleke kakhulu ukuthi wazi ukuthi kubaluleke kakhulu ukulungisa amanani entengo nokuthengwa kwezimali. Phakathi kwezinye izizathu ngoba kunjalo ukusebenza okuqinile kakhulu. Esinye sezici ezifanele kakhulu zale makethe yezezimali ukuba khona kokungazinzi okuphezulu, okuyisithiyo ekusebenzeni ngokuthula okukhulu kulezi ziphakamiso zokutshalwa kwezimali. Ngakolunye uhlangothi, kungukutshalwa kwemali okunconyelwa isikhathi esifushane kakhulu. Ngisho nakumahora ungazifeza izidingo zakho zokutshala imali kule mpahla ethile yezezimali.
Izimali, ngakolunye uhlangothi, zidlulela ngaphezu kwalokho okutholakele ezimakethe zokutshala imali. Ngoba empeleni, uma zibonakala ngokuthize, kungenxa yokuthi ukube empeleni ibingekho imakethe yokushintshaniswa kwamanye amazwe, ukuthengiselana kwamazwe omhlaba bekungafana nokuhwebelana okulula kwemikhiqizo futhi bekuzoba nokuzimela amanani entengo wezwe maqondana namazwe omhlaba. Lokhu kunjalo kunezela ukubaluleka okukhulu emiphumeleni lapho isenzo sabo sisuselwa khona. Yize kuliqiniso ukuthi bambalwa kuphela labo abagxila kakhulu emisebenzini eyenziwa emazweni emhlabeni jikelele.
Mayelana nalokhu, indima ebaluleke kakhulu ihambelana nemali yase-United States. Kuze kube muva nje belilawula iningi lokuthengiselana nelokuhweba. Kuze kube Imali ejwayelekile yaseYurophu, i-euro, nale misebenzi isatshalaliswe cishe ngokulingana okulinganisiwe. Lesi ngesinye sezizathu ezinkulu zokuthi kungani izimakethe zemali zingama-protagonists engxenyeni enkulu yemisebenzi eyenziwa ngabatshalizimali abancane nabaphakathi. Hhayi ngeze, ingxenye enhle yabenzeli bezezimali ilindile ngasikhathi ngasinye sezinguquko zabo entengweni.
Imisebenzi yemakethe ye Forex
Esinye isici esizocaciswa ngalesi sikhathi iqhaza kule hlobo lezimakethe zezimali. Yebo, imisebenzi yayo ichazwe kahle kakhulu futhi kuyadingeka ukuthi usebenzise lo mqondo kusukela manje kuqhubeke. Ngoba impela, Yena imakethe yangaphambili ligcwalisa imisebenzi emibili esemqoka emsebenzini walo. Enye yazo ukuguqula imali yezwe elithile ibe imali yelinye. Lo mqondo uqondakala kalula kunoma yiliphi isu le-monetarist. Kepha ngakolunye uhlangothi, owesibili wemisebenzi yawo usekelwe ekunikezeni ukuphepha okuncane engcupheni yokushintshaniswa okubandakanya lolu hlobo lwemisebenzi ekhetheke kakhulu. Ngandlela thile ikhiqiza uhlobo lwe ukuvikelwa kokunyakaza ezakhiwa ezimakethe zezimali zalezi zici.
Ngoba njengoba wazi kahle, ubungozi bokunyakaza buphakeme kunezinye izimpahla zezezimali ojwayele ukusebenza ngazo nsuku zonke. Futhi yini oyidingayo izinyathelo zokuphepha ephakeme ngenhloso yokulondoloza ngaphezu kwazo zonke izikhundla zakho. Ukufika ezingeni lokuthi akubona bonke abatshalizimali abasesimweni sokusebenza nalezi zinsimbi zokutshala imali. Uma ungenalo isiko lezezimali elanele ongasebenza ngalo, kuzoba ngcono ukuthi uyeke futhi uqondise izimpahla zakho zomuntu kwesinye isigaba sezimpahla zezimali esingeyona inkimbinkimbi ngokwendlela ezakhiwe ngayo nemishini yazo ezimakethe zezimali.
Omunye wemicimbi efaneleke kakhulu ezinyangeni ezisanda kwedlula kube yiwo ukufika kwezimali ezibonakalayo. Kepha qaphela kakhulu ukusebenza kwabo ngoba ekugcineni kosuku akufani noma ngabe benziwa izinhlamvu zemali. Kuyinto ehluke ngokuphelele engahlangene nakancane nendaba esibhekene nayo. Kepha ngokuphambene nalokho, kudlulela kakhulu kokunye okutshalwayo okucacile futhi okuyingozi kakhulu. Ngemiphumela etholakala ekusebenzeni kwayo, njengoba ubona ngalezi zinsuku.
Lezi zimali ezibonakalayo zingabuyekezwa ngokushesha nje lapho kusondele ku-100% kunosuku olulandelayo ezizosala ezimakethe ngamaphesenti afanayo noma ngamandla amakhulu. Ngobungozi obusobala bokukushiya ezimakethe ingxenye ebaluleke kakhulu yokonga okutshaliwe. Kulesi simo, izimali ezibonakalayo azikwazi ukuqhathaniswa, ngokwesibonelo, ne-franc yaseSwitzerland, iphawundi laseBrithani noma i-yen efanayo yaseJapan. Kuyimpahla yezezimali ehluke ngokuphelele. Lokhu yinto okufanele uyicabangele manje ukulungisa noma yikuphi ukunyakaza okungajwayelekile ku-akhawunti yakho yokuhlola. Okuthile okusolwa ngabatshalizimali abancane nabaphakathi emhlabeni wonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ipolitiki yezomnotho » Ipolitiki yezimali » Ukubaluleka kwemakethe yezimali yakwamanye amazwe emnothweni